Ndị nrụpụta RF | China RF Factory & Suppliers
UHF RFID Gate maka People Ọrụ ...
EAS usoro RF EAS 8.2mhz RF ...
EAS etalọ Ahịa ere 58khz AM C ...
EAS mpi AM System Acryl ...
EAS usoro AM System Acryli ...
EAS Anti-Izu 4040mm RF Soft Label Supermarket-4040 Label
Mkpado ndị a bụ obere ngwaọrụ elektrọnik nke nwere kọmpi na antenna, nke a na-emekarị iji gbochie ya ntụtụ n'ụlọ. Site na RF Tags, mkpọtụ dara ụda ga-ada ụda mgbe mmadụ nwara ịhapụ ụlọ ahịa na-akwụghị ụgwọ maka ngwaahịa ahụ na onye ya. Mkpado RF nwere ọtụtụ ngwa ndị ọzọ Ọzọkwa.
Nọmba Model: RF 4040 Label (No.4040 / RF)
Akụkụ: 40 * 40MM (1.57 "* 1.57")
RF 8.2Mhz EAS Mini Tag Square Black na Pin Retail Security Tag-Mini Square
Ihe jikọrọ sistemụ RF niile dabara adaba, njiri mara ihe elektrọnik (EAS), 8.2MHz Rectangular Obere bụ isi nke ọtụtụ ndị na-ere ahịa iji gbochie izu aka. Ya obere ụdị ihe na mfe imewe ka itinye ya ka ihe ezigbo na mfe mgbe nwekwara ichebe ihe na-enweghị na-egbochi ndị ahịa ahụmahụ, merchandising or brand promotion ..
Nọmba Model: Mini Square Tag (Mba. 001 / RF)
Pịnye: RF Tag
Akụkụ: 48 * 42MM (1.81 ”* 1.65”)
Ugboro ugboro: 8.2MHz
RF 8.2Mhz EAS Middle Dome Tag Na Pin Retail Security Tag-Middle Dome
Emere mkpado a maka sistemu RF 8.2MHz. Ihe mkpado ahụ bụ 2.13 ″ (54mm) na dayameta wee bịa na Black. Middle Dome Tag na-agwakọta ike nchọpụta dị ukwuu na imepụta ihe na-adọrọ adọrọ. Ọ dị ka ọ mara mma na nke oge a n'otu oge ahụ ịbụ otu n'ime mkpado kachasị sie ike maka ndị ohi ga-anwa imeri. Designdị ụdị klọmshell ahụ pụtara na enweghị oghere iji nwaa ibelata mkpado ahụ ma ọ bụ ọbụna mepee. Anyị na-akwado mkpado a.
Nọmba Model: Middle Dome Tag (No.016 / RF)
Dimension: φ54MM (φ2.13 ”)
RF 8.2Mhz EAS R50 Tag Na Pin Retail Security Retailers Tag-R50
Nnukwu arụmọrụ, uru na ịdị irè - akara R50 bụ akara nche ama ama ama ama eji arụ n'okporo ámá. Ọ bụ nnukwu ihe mkpado siri ike, ejiri chebe uwe, yana sistemụ nchekwa ụlọ ahịa RF 8.2MHz. Mkpado a na - enye nchọpụta kachasị (1.8m) n’etiti antennas system EAS (pedestals).
Nọmba Model: R50 Kpido (No.019 / RF)
Dimension: φ50MM (φ1.97 ”)
RF 8.2Mhz EAS X50 Kpido Ya na Pin Retail Security Retailers Tag-X50
A na-eji akara Mkpado ma ọ bụ mkpado RF maka nchebe nke uwe. Achọpụtara ha site na antennas RF arụnyere na ndenye ọpụpụ. A na-enweta ya n'ụdị na nha dị iche iche. A na-ejikọta ha na ntụtụ ogologo dị iche iche ma mepee ya na ndenye ọpụpụ ya na onye na-ewepu textile zuru ụwa ọnụ.
Nọmba nlereanya: X50 Kpido (No.022 / RF)
EAS Anti-Izu 4040mm RF Soft Label Supermarket-R42 Label
Aha RF 50x50mm na-anapụta arụmọrụ a pụrụ ịdabere na ya na nchebe ahịa na-eji teknụzụ Radio Frequency (RF). Ezubere akwụkwọ ahụ edere n'ihu aha ahụ iji mee ka ndị ohi nwere ike ịmara na echekwara ihe site na akara nchekwa yana ịre ahịa ngwa ahịa echekwara site na mpaghara nchọpụta ga-eme ka usoro ntọala ahụ pụta.
RF 8.2Mhz EAS Mini Dome Tag Na Pin Retail Security Tag-Mini Dome
Mini Dome Tag dakọtara na 8.2 MHz EAS RF mgbochi-ezu ohi usoro. Nke a bụ mkpado nke agbakwunyere na ngwaahịa iji chebe ya, jiri ntu ma ọ bụ ntụtụ. A na-ejide pin site na mkpado, na-eji mmiri magnet.
Nọmba nlereanya: Obere Dome Tag (No.015 / RF)
Dimension: φ45MM (φ1.77 ”)
EAS Anti-Izu 4040mm RF Soft Label Supermarket-3030 Label
A na-ejikọta akara nro ahụ na ngwaahịa ahụ iji kpuchido ngwaahịa ahụ. - Ngwaahịa nwere akara nro nwere ike ịgafe n'ọnụ ụzọ mgbe ị natachara ụgwọ ma gafee decoder. Ọ bụrụ na ọnụ ụzọ ahụ edopụtaghị, a ga-ewepụta mkpu mkpu. Adabara mgbochi-ezu ohi nke nnweta, mgbochi-ezu ohi na nnukwu ụlọ ahịa, ngalaba na-echekwa, ọdịyo-visual na-echekwa na ebe ndị ọzọ.
Nọmba Model: RF 3030 Label (No.3030 / RF)
Akụkụ: 30 * 30MM (1.18 ”* 1.18”)
RF 8.2MHz EAS Large Square Tag na Pin marklọ Ahịa Security Tag-Nnukwu Square
EAS tag na-ejikarị na-echekwa uwe, okpu, akpa na ihe ndị ọzọ. Enwere ike iji ya na ngwa EAS, dịka pin, lanyards.Can zụrụ ọnụ yana sistemụ, onye mgbapu, pin, lanyard mgbochi, a na-eji ngwaahịa niile ọnụ iji kpuchido nchekwa akụ nke ụlọ ahịa ahụ.
Nọmba nlereanya: Nnukwu Ogwe Ugbo (Mba. 004 / RF)
Akụkụ: 68 * 55MM (2.68 ”* 2.17”)